Oil Free Fryer ▷ ထင်မြင်ချက်များနှင့် အကောင်းဆုံး Air Fryers 2022
Tefal Fry နှစ်သက်ခြင်း။
Cecofry သည် Compact Rapid ဖြစ်သည်
မင်းသမီး Aerofryer XL
အခြား Fryers များ
ဆီမပါသောကြော်- ထင်မြင်ချက်များနှင့် မည်သည့်အရာကို ဝယ်မည်နည်း။
03/2021 တွင် အပ်ဒိတ်လုပ်ထားသည်။
သင်အကြိုက်ဆုံး ကြော်ထားတဲ့ အစားအစာတွေကို လက်မလွှတ်ဘဲ သင့်အစားအစာကို မြှင့်တင်လိုပါသလား။ လေပူကြော်စက်များသည် ရွေးချယ်မှုကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့နှင့်ပတ်သက်သည့် အကိုးအကားဝက်ဘ်ဆိုဒ်သို့ သင်ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်သည်။
အကောင်းဆုံးမော်ဒယ်များနှင့်အတူ ကျွန်ုပ်တို့၏လမ်းညွှန်ချက်များကို လက်လွတ်မခံပါနှင့်၊ ၎င်းတို့လုပ်ဆောင်ပုံ၊ ၎င်းတို့ကို စမ်းသုံးဖူးသူများ၏ ထင်မြင်ယူဆချက်များနှင့် ၎င်းတို့ကို မည်သည့်နေရာတွင် ဝယ်ယူရမည်ကို သင့်အား ပြောပြထားပါသည်။ အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းများ စပိန်မှာအွန်လိုင်း။
လောလောဆယ် ဘယ်အရာတွေက အကောင်းဆုံးလဲ။
Oil Free Fryer သည် မည်သို့အလုပ်လုပ်သနည်း။
Hot Air Fryers ဈေးနှုန်း
၎င်းတို့သည် စျေးကွက်တွင်ရှိနေသည်မှာ နှစ်အနည်းငယ်ရှိပြီဖြစ်သော်လည်း ဤကိရိယာအသေးစားနှင့်ပတ်သက်၍ သံသယရှိသူများစွာရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ မင်းဒီကိုရောက်နေတယ်ဆိုရင် အဲဒါတွေကို မင်းစိတ်ဝင်စားလို့လား၊ ဒါပေမယ့် သေချာမသိဘူး။ ထိုက်တန်ရင် ဘယ်လိုရလဒ်ပေးမလဲ။ ၎င်းတို့သည် သင့်အိမ်အတွက် သင့်လျော်သည်။ ဆက်ဖတ်ပါ အပြည့်စုံဆုံး အချက်အလက်ကို ရှာဖွေပါ။ သမာသမတ်ကျသော၊
ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အား ကူညီပေးခဲ့သည်ရှိမရှိ သိရန်နှင့် တိုးတက်စေရန် နှစ်သက်သည်၊ ထို့ကြောင့် အရေးကြီးသည့်တိုင် မှတ်ချက်တစ်စုံတစ်ရာကို ကြိုဆိုပါသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့ကို အချိန်အနည်းငယ်ပေးပါ။ 🙂
➤ အကောင်းဆုံး ဆီမပါသော အကြော်များကို နှိုင်းယှဉ်ခြင်း။
အရေးကြီးဆုံး ကွာခြားချက်များကို သိမြင်ရန် လွယ်ကူလျင်မြန်စွာ နှိုင်းယှဉ်ပြီး မည်သည့်အရာကို ဆုံးဖြတ်ပါ။ သင့်အိမ်၏လိုအပ်ချက်များနှင့် ပိုသင့်တော်ပါသည်။
ဟင်းချက်ဇုန် ၂ ခု
➤ စျေးကွက်တွင် အကောင်းဆုံးဆီကင်းသောကြော်စက်ကား အဘယ်နည်း။
ဘယ်ဟာက အကောင်းဆုံးလဲဆိုတာ ဆုံးဖြတ်ဖို့က ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာ မူတည်တာမဟုတ်ပါဘူး။ သုံးစွဲသူတိုင်းတွင် ဦးစားပေးများရှိသည်။ ရွေးချယ်မှုအဆုံးအဖြတ်ပေးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ပြောနိုင်သည့်အရာမှာ မော်ဒယ်များသည် ၎င်းတို့၏စွမ်းဆောင်ရည်အတွက်၊ ၎င်းတို့၏ကုန်ကျစရိတ်သက်သာခြင်း သို့မဟုတ် ငွေကြေးအတွက် အကောင်းဆုံးတန်ဖိုးရှိခြင်းတို့ကြောင့် ကျန်မော်ဒယ်များထက် ထင်ရှားပါသည်။
ငါတို့ ပထမဆုံးတွေ့မယ်။ အရေးအပါဆုံး features တွေ စျေးကွက်ရှိ အကောင်းဆုံး စက်ပစ္စည်းများနှင့် ရွေးချယ်မှုအောက်တွင် အခြားထူးခြားသောမော်ဒယ်များ။
၎င်းတို့ကို ကျွန်ုပ်တို့ မည်သို့ရွေးချယ်မည်နည်း။
ဈေးနှုန်းကတော့ Philips HD9220/20 ဖြစ်ပါတယ်။
မိသားစုအတွက် XL လေအေးပေးစက်- 6,2 လီတာ ပန်းကန်လုံးနှင့် 1,2 ပိုင်းအထိအတွက်5ကီလိုဂရမ် ကျယ်ဝန်းသော တောင်းပါရှိသည် - ထိတွေ့မျက်နှာပြင်ပါသည့် ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသည့် ချက်ပြုတ်မှုအစီအစဉ်7ခု
ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်သော ချက်ပြုတ်နည်း- အဆီ 90% အထိ နည်းပါးသော အရသာရှိသော အာဟာရရှိသော အစားအစာများ - အကြော်၊ ဖုတ်၊ အကင်၊ ကင်ပြီး ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ထိပ်တန်းလေကြော်စက်များဖြင့် ပြန်အပူပေးသည်**
စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ထားသော ချက်ပြုတ်နည်းများ- သင့်စိတ်ကြိုက်ကျန်းမာသောနေထိုင်မှုအတွက် စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသော ချက်ပြုတ်နည်းများကို ရှာဖွေရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ NutriU အက်ပ်ကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ - ၎င်းတို့ကို အဆင့်ဆင့် လွယ်ကူစွာ လိုက်နာပါ
အပြင်ဘက်တွင် ကြွပ်ဆတ်ပြီး အတွင်းဘက်တွင် နူးညံ့သည်- ထူးခြားသောကြယ်ပုံသဏ္ဍာန် ဒီဇိုင်းဖြင့် Rapid Air နည်းပညာသည် အရသာရှိသော ကြွပ်ရွပြီး နူးညံ့သော အစားအစာများအတွက် အကောင်းဆုံးလေပူလည်ပတ်မှုကို ဖန်တီးပေးသည်
လွယ်ကူစွာ သန့်ရှင်းရေး- ဖြုတ်တပ်နိုင်သော ပန်းကန်ဆေးစက်-ဘေးကင်းသော အစိတ်အပိုင်းများပါရှိသော လေအေးပေးစက်
✅ အထူးပြုလုပ်ထားသော Airfryer အင်္ဂါရပ်များ
2000 W စွမ်းအား
လျင်မြန်သော Air လေကြောင်းလိုင်းနည်းပညာ
Analog Time နှင့် Temperature Control
ဝယ်သူများထံမှ ကောင်းမွန်သော Feedback များ
အသိအမှတ်ပြုပြီး အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ အမှတ်တံဆိပ်ပါ။
အရမ်းရောင်းကောင်းတဲ့ မော်ဒယ်တွေ အများကြီးရှိပေမယ့် အသိအမှတ်ပြု အမှတ်တံဆိပ်တွေမှာ အရောင်းအ၀ယ်ခေါင်းဆောင်တွေထဲက တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ Philips HD9280 / 90 Airfryer မိသားစုမှ။
ဤစက်ပစ္စည်း၏ ပုံမှန်သတ်မှတ်ချက်များအပြင်၊ Rapid Air နည်းပညာ။ အစားအသောက်ချက်ပြုတ်ရန်အတွက် ဖန်တီးထားသော philips နည်းပညာ မူပိုင်ခွင့် အညီအမျှအနည်းငယ်ဆီနှင့်အတူ။
Tefal Actifry2in 1 ဈေးနှုန်း
သီးသန့် 2-in-1 ပူသောလေအေးပေးစက်သည် အစားအစာတစ်ခုလုံးကို တစ်ချက်တည်းပြင်ဆင်ရန် ချက်ပြုတ်ရန်နေရာနှစ်ခု၊ ထုတ်ကုန်ပေါ်တွင် တိုက်ရိုက်အကင်ပန်းကန်ပြားတစ်ခု ထပ်မံပါဝင်သည်။
လှည့်မွှေသောလက်ဖြင့် လှည့်ပတ်ထားသော လေပူဖြင့် ကြော်ထားသော အစားအစာများကို အလိုအလျောက် အပူချိန်ထိန်းကာ ညင်သာစွာ ချက်ပြုတ်ခြင်းဖြင့် အဆီနည်းသော ကြော်ခြင်းကို ရရှိနိုင်သည်၊ တိကျသောချက်ပြုတ်ရလဒ်များအတွက် 80 မှ 220 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိချိန်ညှိနိုင်သည်။
9 ကြီးမားသောထိတွေ့မျက်နှာပြင်နှင့်အတူ မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် တိုက်ရိုက်အလိုအလျောက်ပရိုဂရမ်များ။ စတင်ချိန်9နာရီအထိနှောင့်နှေးပြီး နွေးထွေးသောလုပ်ဆောင်ချက်ကို ထားရှိပါ။
အဖုံးဖွင့်သောအခါ အလိုအလျောက်ရပ်တန့်သည်၊ အစိတ်အပိုင်းအားလုံး (ActiFry ပန်းကန်၊ အကင်၊ အဖုံး) သည် ဖယ်ရှား၍ရနိုင်ပြီး ပန်းကန်ဆေးစက် ဘေးကင်းပါသည်။ အချက်ပြသံနှင့်အတူ timer
Tefal YV9708 ActiFry Genius XL 2in1၊ ဖြုတ်တပ်နိုင်သော ပန်းကန်လုံးနှင့် အကင်ပန်းကန်၊ ဖြုတ်တပ်နိုင်သော အဖုံး၊ တိုင်းတာရေးဇွန်း၊ အသုံးပြုသူလက်စွဲ
✅ Tefal Actifry ပေါ်လွင်ချက်များ
ကြီးမားသောစွမ်းရည် 1.5 Kg: 4/5 ဝန်ဆောင်မှုများ
1400 W စွမ်းအား
LCD ဖြင့် ဒစ်ဂျစ်တယ် ပရိုဂရမ်မာ
လောလောဆယ် air Frier တွေနဲ့ ဟင်းချက်ဇုန်နှစ်ခု အရောင်းရဆုံးကတော့ Tefal Actifry2in 1. ဤမော်ဒယ်တွင် အထင်ရှားဆုံးသော ဝိသေသများထဲမှတစ်ခုမှာ ဟင်းချက်နိုင်ခြေဖြစ်သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာ အစားအစာနှစ်ခု.
ဒါဟာအစပါဝင်သည် အစာကိုဖယ်ရှားသော ခေါက်ဆွဲလှည့်ခြင်း။ အလိုအလျောက်လက်ဖြင့်ပြုလုပ်ခြင်းမှရှောင်ကြဉ်ပါ။ ၎င်း၏စျေးနှုန်းသည်အတန်ငယ်မြင့်မားသော်လည်း၊ ၎င်းသည်ပုံမှန်အားဖြင့်ကောင်းမွန်သောလျှော့စျေးများဖြင့်ကမ်းလှမ်းမှုများရှိသည်။
Cecofry 4D စျေးနှုန်း
အပေါ်မှ အောက်ခြေအထိ သို့မဟုတ် အထက်နှင့်အောက် တပြိုင်နက်တည်း ချက်ပြုတ်ခွင့်ပြုသည့် ချက်ပြုတ်မှုစနစ်ဖြင့် ဆန်းသစ်ထားသော အစားအသောက်ကြော်အိုးသည် အစားအစာကို 360º ပတ်၍ အပူကို အညီအမျှ ဖြန့်ဝေပေးသည်။
အသုံးပြုရလွယ်ကူစေပြီး နားလည်နိုင်စေရန် ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသော ပရိုဂရမ် 8 ခုပါသော ဆီခဲဖြင့်ချက်သော အလိုအလျောက်ကြော်သည့်- ဆား၊ ပေါင်မုန့်၊ အာလူးချောင်းကြော်၊ မီးဖို၊ လက်စွဲစာအုပ်၊ ဒယ်အိုး၊ ထမင်းနှင့် ဒိန်ချဉ်။ အားစိုက်ထုတ်၍ လက်ကိုင် နှစ်ခုလုံးဖြင့် ချက်ပြုတ်နိုင်သော ဂေါ်ပြားဖြင့် အလိုအလျောက်မွှေရန် ပေါက်တူးတစ်ခု ပါရှိသည်။
ဖြစ်နိုင်သောချက်ပြုတ်နည်းအားလုံးကိုချက်ပြုတ်ရန် 100 မိနစ်မှ 240 မိနစ်အထိအလုပ်လုပ်သော timer ဖြင့်5မှ 90 ဒီဂရီအထိ အပူချိန်ဒီဂရီအလိုက် ချိန်ညှိနိုင်သည်။ ၎င်းတွင် ဒိန်ချဉ်ကို ကြိုတင်သတ်မှတ်အပူချိန် 60ºC တွင် ချက်ပြုတ်နိုင်သည့် မီနူးတစ်ခု ပါ၀င်ပြီး0မိနစ်မှ 16 နာရီအထိ ပြင်ဆင်နိုင်သည်။
ဇယားကွက်ကြောင့် အဆင့်နှစ်ဆင့်ဖြင့် တစ်ချိန်တည်းတွင် ဟင်းနှစ်မျိုးကို ချက်ပြုတ်နိုင်ပြီး ပြင်ဆင်မှုများစွာကို တစ်ချိန်တည်းတွင် ပေါင်းစပ်နိုင်ကာ အချိန်အများဆုံးရနိုင်စေမည့် ရွေးချယ်ခွင့်ရှိသည်။ ၎င်းတွင်3ကီလိုဂရမ်အထိ ချက်ပြုတ်နိုင်သော ကျောက်တုံးသုံးအလွှာပါသော ကြွေထည်အလွှာပါရှိသော 3,5 လီတာဆံ့ဇလုံတစ်ခုပါရှိသည်။ အာလူးများ၏ အောက်ခြေတွင် ကပ်ငြိခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးသည်။
၎င်းတွင် ချက်ပြုတ်နည်း 40 ပါသည့် တော်လှန်ရေးစက်ဖြင့် ချက်ပြုတ်နည်းကို လေ့လာရန် လက်စွဲစာအုပ်နှင့် ဟင်းချက်နည်းစာအုပ်တစ်အုပ်ပါ၀င်သည် fryer မော်ဒယ်။ မည်သည့်ဟင်းကိုမဆို ထိထိရောက်ရောက်ချက်ပြုတ်ရန် 8 W ပါဝါရှိသည်။ ဒယ်အိုး၏အတိုင်းအတာများမှာ- ၃၁ x ၃၉ x (လက်ကိုင်ပါ ၄၇ စင်တီမီတာ) x ၂၃ စင်တီမီတာဖြစ်သည်။
Cecotec စတိုး သဘောတူညီချက်ကိုကြည့်ပါ။
✅ Cecofry 4D ပေါ်လွင်ချက်များ
1350 W စွမ်းအား
အဆင့် ၂ တွင် မီးဖိုချောင်
ဖြုတ်တပ်နိုင်သော Rotary Shovel
8 ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသော ပရိုဂရမ်များ
စပိန်အမှတ်တံဆိပ် Cecotec သည် ပူသောလေအေးပေးစက်ကို စျေးကွက်တင်သည်။ စျေးကွက်တွင်အပြည့်စုံဆုံးနှင့်စွယ်စုံရရှိသည်။ အခုချိန်အထိ။ ၎င်း၏စွမ်းရည် အစားအစာနှစ်ခုကို တစ်ပြိုင်နက်တည်း ချက်ပြုတ်ပါ။ အစားအစာနှင့်၎င်း၏ပြီးပြည့်စုံသောမွှေရန်ဖယ်ရှားနိုင်သည်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်ထိန်းချုပ်မှု။
ဒါတွေအားလုံးတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ Turbo Cecofry 4D တစ်ခုတည်းသော အပူထုတ်လွှတ်သည့် နှစ်လုံးပါရှိသည်၊ အောက်ပိုင်းတစ်ခုနှင့် အထက်တစ်ခုသည် သီးခြားဖြစ်ပြီး အတူတကွ သို့မဟုတ် သီးခြားစီ လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
▷ မင်းသမီး ဆီလွတ်ကြော်
Aerofryer XL စျေးနှုန်း
✅ Aerofryer မီးမောင်းထိုးပြမှုများ
စွမ်းရည် 3.2 လီတာ- 4/5 ဝန်ဆောင်မှုများ
မော်ဒယ်တစ်ယောက်နဲ့ အတူရှာနေတယ်ဆိုရင် ပိုက်ဆံအတွက်တန်ဖိုး ဤကျန်းမာသောအကြော်ကိုသင်စဉ်းစားသင့်သည်။ ၎င်း၏ပုံမှန်ရောင်းစျေးသည် 125 ယူရိုဝန်းကျင်ဖြစ်သည်။ လျှော့စျေးများရှိတတ်သည်။ အဲဒါက ယူရို 90 လောက်ရှိတယ်။ ဝဘ်ပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်ခဲ့သောခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုတွင်သင်တွေ့နိုင်သည်အနည်းငယ်ကွဲပြားမှုရှိသောစက်ပစ္စည်း၏ဗားရှင်းနှစ်မျိုးရှိသည်။
၎င်းသည် ကောင်းမွန်သော ယေဘူယျသတ်မှတ်ချက်များပါရှိသော ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကြီးစွာသောလက်ခံမှုရရှိခဲ့သည်။ ဝယ်သူများကြားတွင် ကောင်းမွန်သော အကဲဖြတ်မှုများပေးသည်။ ၎င်း၏ ပျမ်းမျှစွမ်းရည်၊ ပါဝါနှင့် ၎င်း၏အထက် ပရိုဂရမ်အမျိုးမျိုးဖြင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်ထိန်းချုပ်မှုများ။
ရွေးချယ်မယ်ဆိုရင်တော့ သန့်ရှင်းရေးအတွက် စိတ်ပူစရာမလိုပါဘူး။ ပန်းကန်ဆေးစက်တွင် ဆေးကြောရန် သင့်လျော်သည်။. သင်တွေ့မြင်ရသည့်အတိုင်း ၎င်းသည် မည်သည့်အရာမှ ချို့တဲ့ခြင်းမရှိပါ၊ သုံးစွဲသူများ၏ ကောင်းမွန်သောထင်မြင်ယူဆချက်များနှင့်အတူ ၎င်းသည် ၎င်းကို ရပ်တည်စေသည်။ အရည်အသွေးအကောင်းဆုံး စျေးနှုန်းဖြင့် မော်ဒယ်များအကြား.
Fry Delight စျေးနှုန်း
ချက်ပြုတ်နည်း4မျိုးပါရှိသော ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်သော မီးဖိုချောင်အကြော်အိုး- အကြော်၊ အကင်၊ ကင်၊ ဖုတ် နှင့် ဂျုံ၊ သင့်အစားအစာများတွင် အဆီနှင့်အဆီများကို လျှော့ချပါ။
800 ဂရမ် ပမာဏ3သို့မဟုတ်4ယောက်အတွက် 500 ဂရမ်အထိ 15 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်တွင် 200 မိနစ်အတွင်းပြုလုပ်ထားသောအေးခဲထားသောအကြော်များအပူပေးချိန်အပါအဝင်
မိနစ် 30 ချိန်ညှိနိုင်သော timer ကိုအသုံးပြုရလွယ်ကူသည်။
ကြော်တဲ့အခါ ဆီနည်းနည်း ဒါမှမဟုတ် လုံးဝမသုံးဘဲ ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့ ကြော်ရင် ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်ပြီး အရသာရှိတဲ့ ဟင်းလျာတွေကို ချက်ပြုတ်နိုင်မှာပါ။
အိမ်ကို အနံ့မပြည့်ဘဲ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ ကြော်ထားတဲ့ အစားအစာတွေကို ခံစားလိုက်ပါ။
✅ အသားပေး Features တွေကတော့ Fry Delight ပါ။
800 Grs စွမ်းရည်- 2/3 ဝန်ဆောင်မှု
ပြုပြင်နိုင်သောထုတ်ကုန် 10 နှစ်
ဤကျန်းမာသောကြော်စက်သည်တည်ရှိသောမော်ဒယ်များထဲမှအခြားတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပိုက်ဆံအတွက် အကောင်းဆုံးတန်ဖိုးတွေကြားမှာ. ၎င်း၏ pvp သည် ယူရို 150 နီးပါးရှိသော်လည်း အသုံးအများဆုံးမှာ ၎င်းတွင် အတော်အတန်လျှော့စျေးရှိပြီး၊ ယူရို ၁၃၀၀ ၀ န်းကျင်.
၎င်းသည် ၎င်း၏လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို ပြီးပြည့်စုံစွာလုပ်ဆောင်ရန်နှင့် အောင်မြင်မှုရရှိရန် လုံလောက်သောသတ်မှတ်ချက်များဖြင့် မျှတသောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင့်ဝယ်ယူသူများ၏ကျေနပ်မှု။ အထူးခြားဆုံးအချက်က ၎င်း၏ အသုံးပြုရလွယ်ကူခြင်း၊ မင်းရဲ့ ဒီဇိုင်းက ဘာလဲ။ တည်​​ဆောက်​သည်​ ပြိုကျပါက ပြုပြင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
Fryer စျေးနှုန်းများ ကျစ်လစ် သွက်လက်သည်။
ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်သော ရလဒ်များကို ရရှိစေမည့် ဆီတစ်ဇွန်းတည်းဖြင့် ချက်ပြုတ်နိုင်သော Diet fryer များ။ PerfectCook လေပူနည်းပညာကြောင့် ချက်ပြုတ်နည်းအားလုံးတွင် ထူးခြားသောရလဒ်များ။
ခြင်းတောင်း ပါဝင်သည်။ အာလူး 400 ဂရမ်အထိ ချက်ပြုတ်ပါ။ အချိန်နှင့် အပူချိန်တွင် ပရိုဂရမ် ရေးနိုင်သည်။
၎င်းတွင် အပူချိန် 200 ºC အထိရှိသည်။ ချိန်ညှိနိုင်သောအချိန်0မှ 30 မိနစ်။
✅ ကျစ်ကျစ်လစ်လစ် လျင်မြန်သော ပေါ်လွင်ချက်များ
1.5 လီတာ ပမာဏ-2စားသုံးမှု အများဆုံး
900 W စွမ်းအား
အင်နာလော့ အပူချိန်ထိန်းကိရိယာနှင့် အချိန်တိုင်းကိရိယာ
Aliexpress မှာ စျေးသက်သာပေမယ့် လိုချင်ရင် ရှာနိုင်ပါတယ်။ ပိုက်ဆံနည်းနည်းသုံးတယ်။ Air Fryer တွင်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။ Cecofry Compact Rapid သည် Cecotec. တရုတ်နှင့်ဤမော်ဒယ်ကိုရွေးချယ်ခြင်းဖြင့်သင်ပိုမိုသက်သာလိမ့်မည်မဟုတ်သည်မှာသေချာပါသည်။ စပိန်ကုမ္ပဏီ သင့်တွင် နှစ်နှစ်အာမခံရှိသည်။
အမှတ်တံဆိပ်သည် RRP ကို ​​75 ယူရိုဝန်းကျင်ဟုကြေငြာသော်လည်း ၎င်းနေရာတွင် လျှော့စျေးများရှိသည်။ အကြောင်းကို 40 ယူရို. ဒီစျေးနှုန်းနဲ့ ဆီမရှိသလောက် ချက်ပြုတ်ချင်ရင် လေပူနည်းပညာကို စမ်းသုံးကြည့်ဖို့ အကြောင်းပြချက် မရှိပါဘူး။
▷ အကောင်းဆုံးအမှတ်တံဆိပ်တွေက ဘာတွေလဲ။
လောလောဆယ် အဲဒါတွေ အကောင်းဆုံးအမှတ်တံဆိပ်လေးခု ကျယ်ပြန့်သောကတ်တလောက်အတွက် ဆီအနည်းငယ်ပါသော အကြော်များထဲတွင်၊ အရောင်းရဆုံးမော်ဒယ်များ စပိန်တွင်။
၎င်းတို့၏ အကောင်းဆုံး စက်ပစ္စည်းများနှင့် ကုမ္ပဏီတစ်ခုစီ၏ ပေါ်လွင်ချက်များကို ကြည့်လိုပါက ပုံပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ။
Philips Airfryer Oil Free Fryers များ
Cecotec Cecofry Oil Free Fryers များ
➤ အခြားသော အထူးအသားပေး လေပူကြော်များ
ကျွန်ုပ်တို့၏ သုံးသပ်ချက်များကို ၎င်းတို့တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အခြားသော မော်ဒယ်များကို အသေးစိတ် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပါသည်။ စပိန်စျေးကွက်တွင်ပြသခဲ့သည်။
သင်ရှာဖွေတွေ့ရှိလိမ့်မည်။ အားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များကို၎င်းတို့နှင့်အတူ ချက်ပြုတ်ပြီးသား သုံးစွဲသူများ၏ ထင်မြင်ယူဆချက်၊ ဘယ်မှာဝယ်လို့ရမလဲ။ သင့်အတွက် အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းဖြင့်
Moulinex Easy Fry Deluxe EZ401D Oil Free Fryers များ
Cosori Oil Free Fryers များ
ဆီမပါသော အကြော်အိုးဆိုတာ ဘာလဲ။
၎င်းသည် အောင်မြင်သော အိမ်သုံးပစ္စည်းများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်လာသည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ပထမအကြိမ် သို့မဟုတ် ဒုတိယသင်တန်းများနှင့် အချိုပွဲများ ချက်ပြုတ်နည်းအမျိုးမျိုးကို ပြင်ဆင်နိုင်သော်လည်း ဆီမလိုပဲ သို့မဟုတ် ဇွန်းတစ်ဇွန်းမျှဖြင့် ç၎င်းတို့သည် မြင့်မားသောအပူချိန်နှင့် အရှိန်အဟုန်ဖြင့် လည်ပတ်နေသော လေများဖြစ်မည်ဟူသောအချက်အပေါ် အခြေခံထားသည့် ပေါင်းစပ်နည်းပညာအသစ်ဖြင့် လာသောကြောင့် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ဒါမှ အစားအသောက်ကို ကြွပ်ဆတ်တဲ့ အရသာကို ရရှိစေမှာ ဖြစ်ပေမယ့် ဆီများများထည့်စရာမလိုဘဲ အရသာရှိပါတယ်။
➤ ဘယ်ဆီလွတ်မီးဖိုကို ဝယ်ရမလဲ။
COSORI Fryer မပါသော...
ကျွန်ုပ်တို့၏အကြံပြုချက်မှာ Tefal၊ Philips၊ Princess၊ Cecotec ကဲ့သို့သော စပိန်နိုင်ငံရှိ နည်းပညာဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များကို ဝယ်ယူရန်ဖြစ်သည်... ၎င်းတို့သည် အပူချိန်မြင့်မားပြီး အလွန်အကျည်းတန်သော စက်ပစ္စည်းများကို ပိတ်ထားပြီး အလွန်အကျုံးဝင်ကြောင်း မှတ်သားထားပါ၊ ထို့ကြောင့် သင်သည် မည်သည့်နေရာတွင်ရှိခြင်းကို နှစ်သက်လိမ့်မည်နည်း။ ပြုပြင်ရန် သို့မဟုတ် လိုအပ်ပါက အပိုပစ္စည်းများကို မည်သည့်နေရာတွင် ဝယ်ယူရမည်နည်း။ အရှိန်အဟုန်ဖြင့် SAT မပါသော အဖြူရောင်အမှတ်တံဆိပ်များစွာ ထွက်ပေါ်လာပြီး အချို့သော Brand Model များနှင့် ဈေးနှုန်းကွာခြားမှုမှာ အလွန်များပြားခြင်းမရှိပေ။
▷ ဘယ်တစ်ခုကို ရွေးမလဲ။ အရေးကြီးသောရှုထောင့်
အရေးကြီးဆုံးအချက်များ Air Frier ကိုရွေးချယ်ရာတွင် သတိထားရမည့်အချက်များမှာ-
မော်ဒယ်ငယ်များကို ရောင်းချသည်၊ စုံတွဲများ သို့မဟုတ် တစ်ကိုယ်ရေများအတွက် အထူးသင့်လျော်ပြီး မိသားစုတစ်ခုလုံးအတွက် ပိုကြီးသောမော်ဒယ်များကို ရောင်းချပေးသောကြောင့် ၎င်းကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။ သင့်လိုအပ်ချက်နှင့် အကိုက်ညီဆုံး စွမ်းဆောင်ရည်ကို ရွေးချယ်ပါ။
ထူးခြားမှုတစ်ခုဖြစ်စေနိုင်သောကြောင့် ပျက်မသွားမီ အစွမ်းထက်သော အကြော်အိုးကို ဝယ်ခြင်းက ပိုကောင်းပါတယ်။ အရည်အသွေးနှင့် ချက်ပြုတ်ချိန်. မည်သို့ပင်ဆိုစေ၊ ပိုမိုမြင့်မားသောပါဝါသည် ပိုမိုထိရောက်မှုရှိကြောင်း အရိပ်အယောင်မဟုတ်ပါ၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၎င်းသည် စက်ပစ္စည်းကိုအသုံးပြုသည့်နည်းလမ်းပေါ်တွင်မူတည်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဆေးကြောရလွယ်ကူအောင် လုပ်ပါ။ သန့်ရှင်းရေးက ခက်ခဲပြီး ရှုပ်ထွေးနေတယ်ဆိုရင် အစပိုင်းမှာ သင်ထင်ထားတာထက် ပိုအရေးကြီးတဲ့အရာတစ်ခုပါ။
စျေးနှုန်းသည် အများအားဖြင့် ဝယ်ယူမှုတိုင်းတွင် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့် အချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပြီး ကံကောင်းထောက်မစွာ သင့်တွင် စျေးနှုန်းများအားလုံး၊ အကောင်းဆုံးအမှတ်တံဆိပ်များတွင်ပင်။
✅ ဝယ်သူများ၏ သုံးသပ်ချက်
သင့်ဝယ်ယူမှုကို မှန်မှန်ကန်ကန်ရရှိရန် နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုမှာ ၎င်းတို့ကို စမ်းသုံးပြီးသား ဝယ်သူများ၏ ထင်မြင်ယူဆချက်များကို ဖတ်ရှုရန်ဖြစ်သည်။ ဝေဖန်ချက်တွေကို ဖတ်ကြည့်စမ်းပါ။ အမှတ်တွေကို မကြည့်ပါနဲ့။အဖြစ်မှန်ကို ပိုထင်ဟပ်လာတတ်သည်။
အထက်ဖော်ပြပါအချက်များသည် အရေးကြီးဆုံးအခြေခံများဖြစ်သော်လည်း၊ များစွာတိုးတက်ကောင်းမွန်လာနိုင်သည့် အင်္ဂါရပ်များစွာရှိသည်။ အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံနှင့် ချက်ပြုတ်မှုရလဒ်များ.
၎င်းသည် အောင်မြင်သောအကြံဉာဏ်ထက် ပိုသည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ပြောခဲ့ပြီးပြီဆိုလျှင်၊ ယခုကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့ကို အနိုင်ယူပြီးအဆုံးသတ်မည့် ၎င်း၏အဓိကအားသာချက်များကား အဘယ်နည်းဖြစ်သည်ကို ကျွန်ုပ်တို့သိထားရမည်ဖြစ်သည်။
ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ ဟင်းပွဲတွေ အများကြီးပါ။: တစ်ခါတစ်ရံ ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝအရှိန်အဟုန်ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် မျှတသောအစာကိုစားရန် မရပ်တန့်သည်မှာမှန်ပါသည်။ ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့အား ကယ်လိုရီအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲစေမည့် အဆီအများအပြားကို ကျွန်ုပ်တို့၏ခန္ဓာကိုယ်သို့ အမြန်စားသုံးစေပြီး ဆိုးဆိုးရွားရွားဖြစ်စေသည်။ ထို့ကြောင့် ဆီမပါသောကြော်သည် ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်သော ဟင်းလျာများကို ရရှိစေပြီး အဆိုပါအဆီများကို 80% ထက် ပိုလျှော့ချပေးမည်ဖြစ်သည်။
မီးဖိုချောင်မှာ အချိန်ကုန်သက်သာမယ်။: Deep fryer များသည် အမြန်ဆုံး ကိရိယာများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်း အဆင်သင့်နှင့် အရသာရှိသော ဟင်းလျာများကို ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့် မီးဖိုချောင်မှာ အချိန်အများကြီးဖြုန်းခြင်း သို့မဟုတ် အချိန်တွေကို ထိန်းချုပ်ခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ပါလိမ့်မယ်။ ဤကိစ္စတွင်၊ အစားအစာနှင့်၎င်း၏ချက်ပြုတ်ချိန်ပေါ် မူတည်၍ လိုအပ်သော programming ကိုသင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
စွမ်းအင်အသုံးစရိတ်နည်းတယ်။: အလင်းအများကြီး အသုံးမပြုနိုင်တဲ့ ပစ္စည်းတွေထဲက တစ်ခုပါ။ ဒီတော့ ဒီကိစ္စမှာ မီးဖိုနဲ့ နှိုင်းယှဉ်လို့ရတယ်။
အချိန်တိုင်းကိရိယာ ပါဝင်သည်။: အစားအသောက်အတွက် စိတ်မပူပါနှင့်၊ အချိန်တိုင်းကိရိယာဖြင့် အသင့်ဖြစ်သောအခါ သင့်ကို အကြောင်းကြားပါမည်။ ၎င်းတို့တွင် အပူချိန်ထိန်းညှိပေးလေ့ရှိသောကြောင့် အပူချိန်ကိုလည်း သင်မစိုးရိမ်သင့်ပါ။
၎င်းတို့သည်အသုံးပြုရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။: စက်တစ်လုံးဝယ်တိုင်း အသုံးပြုရခက်မည်ကို စိုးရိမ်သော်လည်း ထိုသို့မဖြစ်ပါ။ တိကျသောဆက်တင်များပြုလုပ်ရန် ၎င်းတို့တွင် ဒစ်ဂျစ်တယ်ထိန်းချုပ်မှုတစ်ခုရှိသည်။
သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန်လွယ်ကူသည်။: ကျွန်ုပ်တို့ မကြာခဏ အသုံးပြုလေ့ရှိသော စက်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့် သန့်ရှင်းရလွယ်ကူစေရန်အတွက် လိုအပ်ပါသည်။ ၎င်း၏အစိတ်အပိုင်းများကို ဖယ်ရှားပြီး ပန်းကန်ဆေးစက်တွင် ဆေးကြောနိုင်ပါသည်။ လက်နဲ့ကြိုက်ရင် ဆပ်ပြာအပျော့စားနဲ့ ရေမြှုပ်နဲ့လုပ်မယ်။
ဟင်းချက်တဲ့အခါ အနံ့ဆိုးတွေကို နှုတ်ဆက်လိုက်ပါ။: နောက်ထပ်အားသာချက်တစ်ခုကတော့ သင့်မီးဖိုချောင်မှာ နာရီပေါင်းများစွာကြာအောင် အနံ့အသက်ဆိုးတွေ ဒါမှမဟုတ် တခြားပစ္စည်းတွေနဲ့ ပေါ်လာနိုင်တဲ့ မီးခိုးငွေ့တွေ မရှိစေရပါဘူး။
ဆီမပါတဲ့ အကြော်က ဘယ်ဟာပိုကောင်းလဲ?
သံသယများစွာရှိနေသည်မှာမှန်သော်လည်း ကျွန်ုပ်တို့သည် ၎င်းတို့အား အမြန်ဖယ်ရှားပေးပါမည်။ အကျယ်အားဖြင့်ပြောရလျှင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဆီဖြင့်ကြော်ခြင်းကို ကျင့်သားရနေပါသည်။ သို့သော် ၎င်းတို့တွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကယ်လိုရီပိုစားသုံးမည်ဟူသောအချက်အပြင် ယင်းအဆီအတွက် ကုန်ကျစရိတ်များ ရှိပြီး ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ကျန်းမာရေးအတွက် ကျွန်ုပ်တို့ကို ကျေးဇူးတင်ရမည့်အရာမဟုတ်ပါ။ ထို့ကြောင့် ဆီမပါသောကြော်များသည် ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်ပြီး အဆုံးမဲ့ဟင်းလျာများကို ဖန်တီးနိုင်စေပါသည်။
ဒါကြောင့် သူတို့မှာရှိနေတဲ့ အားသာချက်တွေအားလုံးအတွက်၊ ငါတို့က သူတို့နဲ့အတူ အမြဲရှိနေမှာပါ၊ ဒါပေမယ့် ရလဒ်တွေက ပြီးပြည့်စုံနေပေမယ့်၊ တချို့က အဆီတွေလို ပြတ်သားတဲ့ အချောထည်ကို မရကြဘူး။. ဘယ်ဟာကို ပိုကြိုက်လဲ။
နက်ရှိုင်းသောအကြော်သည် ဆီမပါဘဲ ဘာလုပ်နိုင်သနည်း။
အကြော်: နက်နဲတဲ့ အကြော်အိုးအကြောင်း ယုတ္တိနည်းကျကျပြောရရင်၊ ကြော်ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ ကောင်းပြီ၊ ဒီကိစ္စမှာ သူ့ကို ချန်ထားခဲ့မှာ မဟုတ်ဘူး။ အာလူးချောင်းကြော်တွေအပြင် croquettes ဒါမှမဟုတ် steak တွေလို မုန့်လုပ်စားစရာတွေလည်း ကြိုက်နိုင်ပါတယ်။. ဒါပေမယ့် ကြက်ဥကြော်က ဆီမပါတဲ့ နက်နဲတဲ့ အကြော်ဆိုင်ရဲ့ မီနူးမှာ နေရာတစ်ခုပါပါတယ်။ ရလဒ်က အံ့သြစရာထက်ပိုပြီး သင်နှစ်သက်သွားပါလိမ့်မယ်။
ဆန္ဒပြုပါ။: သံသယမရှိဘဲ၊ အစားအစာတစ်ခုစီ၏ ပြီးမြောက်မှုသည် ၎င်း၏အရသာအကြောင်း များစွာပြောပြမည်ဖြစ်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏အရသာများကို တင်းတင်းကျပ်ကျပ် လိုက်နာပါမည်။ ထို့ကြောင့် သင်တစ်ဦးတည်းကို နှစ်သက်လျှင် အစားအစာကို အပြင်ဘက်တွင် အနည်းငယ်ကြွပ်စေသည်။ အရည်ရွှမ်းပြီး ချောမွေ့သော အတွင်းခန်းဖြင့်၊ ထို့နောက် ဆီမပါပဲ သင့်အကြော်အိုးတွင် ဤလုပ်ဆောင်ချက်ကို လောင်းနိုင်သည်။ ဥပမာ၊ အသား၊ ဥပမာ၊ မင်းကို ကျေးဇူးတင်ဆုံးဖြစ်မယ့် ပါဝင်ပစ္စည်းတွေထဲက တစ်ခုပါ။
မုန့်ဖုတ်: ဘယ်လိုမြင်လဲ အကြိမ်ပေါင်းများစွာရှိတယ်။ ဆီမပါသော အကြော်သည် မီးဖိုနှင့် အနည်းငယ် နှိုင်းယှဉ်ပါသည်။. အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၎င်းသည် အစားအစာထုပ်ပိုးရန် အရှိန်ပြင်းစွာ လှည့်ပတ်နေသော လေဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ၎င်းသည် လူကြိုက်အများဆုံး ချက်ပြုတ်နည်းများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ အချို့သော အဓိက ဟင်းလျာများအတွက်သာမက အချိုပွဲများ ပြုလုပ်ရန်အတွက်လည်း ဖြစ်သည်။
အာသနန်းစံ: ဆီမပါသော အကြော်ဆိုင်တွင် ပြီးပြည့်စုံသော ကင်ပြီးသားဖြစ်သည်။ စဉ်းစားနေတယ်ဆိုရင် အကင် သို့မဟုတ် အသားကင်ပုံစံဖြင့် ဟင်းလျာများကို အတွဲလိုက်ပြင်ဆင်ပါ။ဒါဆိုရင် ဒီ function ကိုသုံးရပါမယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ရလဒ်က အံ့သြစရာပါပဲ။ ပထမဟင်းလျာများသည် အသားပေါ်တွင်သာ ရှင်သန်နေသော်လည်း ငါး သို့မဟုတ် အာလူးကင်များကိုပင် ရွေးချယ်နိုင်သည်။
Cocer: ဆီမလိုသလို အစားအသောက်ချက်ပြုတ်တဲ့အခါမှာလည်း ဆီမလိုဘူးလို့ ပြောထားပြီးသားပါ။ ၎င်းသည် လူကြိုက်အများဆုံး ချက်ပြုတ်နည်းများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ အကြောင်းမှာ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။ လုံးဝကျန်းမာသောရွေးချယ်မှု အဲဒါ ငါတို့ကြိုက်တယ်။ ထို့အပြင်၊ မိမိကိုယ်ကို ဂရုစိုက်ရန် သို့မဟုတ် မူရင်းပြင်ဆင်မှုများ ပြုလုပ်ရန် ပြီးပြည့်စုံသည်။ သင်တွေးနိုင်သမျှ။
➤ Air Fryers ၏ အသုံးပြုသူ သုံးသပ်ချက်
လေပူကြော်စက်အသုံးပြုသူများ ဘာပြောသည်ကို သင်သိချင်သည်မှာ သေချာပါသည်။ အများစုက ထင်မြင်ချက်ကောင်းတယ်။မယုံကြည်တဲ့ သူတွေလည်း ရှိပေမယ့်။
မကျေနပ်သော သုံးစွဲသူအများစုသည် ဆီအနည်းငယ်ဖြင့် ကြော်သောအခါ အစားအစာသည် ပုံမှန်ကြော်ထားသော အစားအစာများနှင့် မတူကြောင်း ညည်းညူကြသည်။ ဤသည်မှာ ယုတ္တိရှိသော်လည်း မှတ်သားထားသင့်သည်။
အချို့ကို သင်ဖတ်နိုင်သည်။ ပျော်ပျော်နေတတ်တဲ့ ဝယ်သူတွေရဲ့ မှတ်ချက်၊ သို့မဟုတ် သင်လုပ်ဆောင်ခဲ့သော စမ်းသပ်မှု အစားအသောက်:
“ဆီစစ်ပြီး လေလုံအောင် သိမ်းထားရတာကို သဘောကျတယ်။ အပူပေးခြင်းသည် ချောမွေ့ပြီး မြန်ဆန်သည်။ ဟင်းချက်နည်းမျိုးစုံကို စမ်းကြည့်ဖူးပြီး ရလဒ်က အမြဲတမ်းကောင်းပါတယ်။ အားလုံးက ကြွပ်ကြွပ်နဲ့ အညိုရောင်ရှိပြီး သုံးထားတဲ့ဆီက အလွန်အကျွံပုံမပေါ်ပါဘူး”
“အရင်က နက်နဲတဲ့အကြော်အိုးကို မပိုင်ဆိုင်ဖူးဘူး၊ ဘယ်လောက်ကောင်းလဲ၊ ဘယ်လောက်ညစ်ပတ်မယ်ဆိုတာကို တော်တော်သံသယဖြစ်မိတယ်။ ဤအရာသည် အလွန်ကောင်းသည်! အတောင်ပံတွေနဲ့ လုပ်ထားတယ်။ အကောင်းဆုံး အပိုင်းကတော့ ဆီတွေကို သိုလှောင်ပြီး ပြန်သုံးဖို့ ဘယ်လောက်လွယ်လဲ။ စနစ်သည် အညစ်အကြေး လုံးဝကင်းစင်ပါသည်။ အကြော်ခြင်းတောင်း၊ ပန်းကန်လုံးနဲ့ အပေါ်ကနေ ဖယ်ရှားပြီး ဆေးကြောရလွယ်ကူတာကြောင့် သန့်ရှင်းရေးက အရမ်းလွယ်ကူပါတယ်။
"ဒီအကြော်က မင်းကြော်တဲ့ပြဿနာကို ဖြေရှင်းပေးလိမ့်မယ်။ အနံ့နဲ့ ဖုန်တွေကြောင့် ကြော်ရတာ မကြိုက်ဘူး။ ဤနက်နဲသောအကြော်သည် အသုံးပြုရလွယ်ကူပြီး ပန်းကန်ဆေးစက်ထဲတွင် ထည့်ထားသကဲ့သို့ သန့်ရှင်းရန်လည်း လွယ်ကူပါသည်။ ပန်းကန်ဆေးစက်ထဲသို့ မဝင်နိုင်သော တစ်ခုတည်းသော အစိတ်အပိုင်းမှာ ပန်းကန်ဆေးစက်အတွင်း အလွယ်တကူ သန့်စင်နိုင်သော အပူပေးသည့် အပိုင်းဖြစ်သည်။ ဆီစစ်တာက ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်ပြီး အညစ်အကြေးတွေ မဖန်တီးပါဘူး၊ ရေခဲသေတ္တာ၊ အာလူး၊ ကြက်သား စတာတွေကို ရေခဲသေတ္တာကနေ တိုက်ရိုက် ကြော်ထားတယ်၊
ဆီမပါဘဲ လုံး၀ အလုပ်မလုပ်ပေမယ့် တာရှည်ခံတဲ့ အကြော်တွေထက် ပိုကောင်းပါတယ်။
မတူညီသောအပူချိန်ကို သတ်မှတ်ရန် နောက်ထပ်ရွေးချယ်စရာများ ရှိချင်ပါသည်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်သုံးတာက ပိုကောင်းလိမ့်မယ်၊ ဒါပေမယ့် ဒါက ငါ့ချစ်သူဆီက အံ့အားသင့်စရာလက်ဆောင်တစ်ခုမို့ ငါညည်းညူလို့မရဘူး။"
▷ ကောက်ချက် Mifreidorasinaoite
ကျွန်ုပ်တို့၏အမြင်အရ ၎င်းသည် လိုချင်သူများအတွက် ရွေးချယ်မှုကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင့်အစားအသောက်များတွင် အဆီလျှော့ပါ။ “အကြော်” ကို လုံးဝ လက်မလွှတ်ဘဲ။ မီးဖိုမှာ ချက်ပြုတ်ရတာ ကြိုက်တဲ့ သူတွေအတွက် အိမ်သုံးပစ္စည်းလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အားသာချက်က ပိုသက်တောင့်သက်သာရှိပြီး သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရလွယ်ကူပါတယ်။
ဝယ်ရင် သမားရိုးကျ မော်ဒယ်တွေလိုပဲ ကြော်စားတော့မယ်။ သင့်ကို စိတ်ပျက်စေလိမ့်မည်။မဟုတ်ပါက အသုံးပြုသူအများစုကဲ့သို့ ဝယ်ယူမှုနှင့်အတူ သင် ပျော်ရွှင်နေမည်မှာ သေချာပါသည်။
လေပူနဲ့ ချက်တာများလို့ များများကြော်တာကို မယုံရင် ဟင်းချက်ကြည့်လိုက်ပါ။ Water Fryer Movilfrit
➤ Oil Free Fryers စျေးနှုန်းများ
COSORI Fryer မပါသော... အင်္ဂါရပ်များကိုကြည့်ပါ 79.856 သုံးသပ်ချက်များ သဘောတူညီချက်ကိုကြည့်ပါ။
၂၃ လီတာ ဆီမပါသော မီးဖိုချောင်... အင်္ဂါရပ်များကိုကြည့်ပါ 158 သုံးသပ်ချက်များ သဘောတူညီချက်ကိုကြည့်ပါ။
Aigostar Cube - Deep Fryer... အင်္ဂါရပ်များကိုကြည့်ပါ 2.550 သုံးသပ်ချက်များ သဘောတူညီချက်ကိုကြည့်ပါ။
မပါဘဲ Cecotec Fryer ... အင်္ဂါရပ်များကိုကြည့်ပါ 262 သုံးသပ်ချက်များ သဘောတူညီချက်ကိုကြည့်ပါ။
COSORI Fryer မပါသော... အင်္ဂါရပ်များကိုကြည့်ပါ 11.075 သုံးသပ်ချက်များ သဘောတူညီချက်ကိုကြည့်ပါ။
COSORI Fryer မပါသော... အင်္ဂါရပ်များကိုကြည့်ပါ 14.504 သုံးသပ်ချက်များ သဘောတူညီချက်ကိုကြည့်ပါ။
အကောင်းဆုံး	COSORI Fryer မပါသော...
စျေးနှုန်းအရည်အသွေး	၂၃ လီတာ ဆီမပါသော မီးဖိုချောင်...
ငါတို့အကြိုက်ဆုံး	Aigostar Cube - Deep Fryer...
မပါဘဲ Cecotec Fryer ...
Low Oil Air Fryers များအတွက် စျေးနှုန်းများသည် ယေဘူယျအားဖြင့် ဖြစ်သည်။ ရိုးရာထက် သာလွန်သည်။. ဒါတောင်မှ၊ စျေးနှုန်းအမျိုးမျိုးက အရမ်းကောင်းပြီး ယူရို 50 ဝန်းကျင်ရှိတဲ့ တပ်ဆင်မှုအများဆုံးကိုတောင် ယူရို 250 လောက်နဲ့ တတ်နိုင်တဲ့ မော်ဒယ်တွေကို ရှာတွေ့နိုင်ပါတယ်။
RRP သည် အချို့သောမော်ဒယ်များတွင် မြင့်မားသော်လည်း၊ တစ်နှစ်အတွင်း အမှတ်တံဆိပ်အားလုံးအတွက် ကောင်းမွန်သောလျှော့စျေးများဖြင့် ကမ်းလှမ်းမှုအနည်းငယ်ရှိသည်။ ခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့် အကောင်းဆုံးကမ်းလှမ်းမှုများကို ယခုမြင်တွေ့နိုင်ပါသည်။
Black Friday Oil Free Fryers များ
▷ အရောင်းရဆုံးဆိုတာ ဘာလဲ။
amazon spain betsellers များဖြင့် 24 နာရီတိုင်း စာရင်းကို အလိုအလျောက် အပ်ဒိတ်လုပ်ပါသည်။
၂၃ လီတာ ဆီမပါသော မီးဖိုချောင်...
▷ Diet Frier ကို ဘယ်မှာဝယ်လို့ရလဲ။
သင့်ကျန်းမာသော အကြော်အိုးကို ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစတိုးဆိုင်များတွင် သို့မဟုတ် အွန်လိုင်းစတိုးများတွင် ဝယ်ယူနိုင်သည်၊ ၎င်းသည် အမျိုးအစားများစွာကို ပိုမိုတွေ့ရှိရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ သင်သည် lidl တွင် silvercrest ကိုသာတွေ့လိမ့်မည်၊ ၎င်းသည်အမြဲတမ်းမရနိုင်ပါ။
အွန်လိုင်းဝယ်ယူမှုများအတွက် ကျွန်ုပ်တို့သည် Amazon ကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း အကြံပြုပါသည်။မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း ကျွန်ုပ်တို့၏ယုံကြည်မှုနှင့် စားသုံးသူများစွာကို ရရှိခဲ့သည်။ e-commerce ဧရာမကို သင်သိမှာသေချာပေမယ့် မဟုတ်ရင် ငါတို့ပြောပြမယ်။ အကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည့် အကြောင်းရင်းများ:
မြန်ဆန်ပြီး စျေးသက်သာသော ပို့ဆောင်မှု
ဒါပေမယ့် စျေးပေါတဲ့ ဆီမပါသော အကြော်ဆိုင်ကို ဝယ်ဖို့ နောက်ထပ် နေရာတွေ ရှိပါသေးတယ်။
အမေဇုံဖြေ - ငါတို့သိထားတဲ့အတိုင်း အွန်လိုင်းအရောင်းအ၀ယ်လုပ်ငန်းကြီးတွင် ဆီမပါသော အကြော်ဆိုင် အမျိုးမျိုးရှိသည်။. ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် မတူညီသော မော်ဒယ်များ၊ လက္ခဏာများနှင့် သင့်နေ့စဉ်လိုအပ်ချက်အတွက် သင်လိုအပ်သမျှကို ရှာဖွေနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် များစွာသော အမျိုးအစားများကြားတွင် စျေးနှုန်းများလည်း ကွဲပြားနိုင်ပြီး သင်၏ဝယ်ယူမှုတွင် သင့်အား သက်သာရာရစေသည်မှာ အမှန်ပင်ဖြစ်သည်။
အယ်လ် Corte Ingles: အမှတ်တံဆိပ်ကြီးများသည် El Corte Inglés တွင်လည်း တွေ့ဆုံကြသည်။. ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် အခြေခံအကျဆုံး မော်ဒယ်များသာမက အရွယ်အစား သို့မဟုတ် သတင်းအရ ရံဖန်ရံခါ အရောင်းရဆုံး အရောင်းရဆုံး မော်ဒယ်များကိုလည်း ရှာဖွေသွားပါမည်။ စျေးနှုန်းများအနေဖြင့် မော်ဒယ်များပေါ် မူတည်၍ အခြားသော စျေးနှုန်းများထက် လျှော့စျေးကိုလည်း ရရှိနိုင်ပါသည်။
Lidl: အဆိုပါ Lidl စူပါမားကတ် ခြေလှမ်းတိုင်း၌ ကျွန်ုပ်တို့ကို အံ့သြစေသည်။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ ဒီလို ပစ္စည်းတွေ ဟာ သူတို့ရဲ့ ကတ်တလောက် မှာ အခါအားလျော်စွာ ပေါ်လာလို့ပါ။ ငါတို့ကို ပိုနီးစေမယ့် လေကြော်အိုးမှာ ငါတို့ကို သယ်သွားရအောင် ငါတို့လိုအပ်တာမှန်သမျှ ရှိတယ်။ ဒါဟာတကယ်စျေးပေါပြီးအသုံးပြုရလွယ်ကူသည်။ ၎င်း၏တစ်ခုတည်းသောမော်ဒယ်မဟုတ်သော်လည်း9တွင်ရွေးချယ်စရာ 1 ခုပါရှိသောနောက်ထပ်လေပူမော်ဒယ်ကိုလည်းပြသထားသည်။ ၎င်းတို့ကိုကျွန်ုပ်တို့၏လိုအပ်ချက်များနှင့်ချိန်ညှိနိုင်စေရန်ပြီးပြည့်စုံသောရွေးချယ်မှုနှစ်ခုရှိသည်။
Carrefour: ဤကိစ္စတွင်၊ အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုများသည် သင်ရှာဖွေရမည့်အရာများဖြစ်သည်။ ဆီမပါသောကြော်သည် ၎င်း၏ဝဘ်ဆိုဒ်တွင် အရောင်းရဆုံးပစ္စည်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၊ သင်သည် နာမည်ကြီးအမှတ်တံဆိပ်များအတွက် လျှော့စျေးများကိုလည်း ခံစားနိုင်သည်။ ကျစ်လစ်သော မော်ဒယ်များမှ မီးဖိုအတွက် အနံရှိသော အခြားသူများအထိ။ စျေးနှုန်းများသည် ၎င်းတို့အားလုံးတွင် ကွဲပြားသော်လည်း သင် တတ်နိုင်သော ရွေးချယ်မှုများကို သင်တွေ့ရှိရဆဲဖြစ်သည်။
CecotecCecotec အမှတ်တံဆိပ်သည် တဖြည်းဖြည်း ကြီးထွားလာပါသည်။ ၎င်းတို့၏ ထုတ်ကုန်များကြောင့် ၎င်းတို့တွင် အအောင်မြင်ဆုံး နည်းပညာဖြင့် တောင်းဆိုမှုအရှိဆုံးများထဲမှ အထူးအခွင့်အရေးတစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ဆီမပါသော အကြော်ဆိုင်များတွင် ချန်ထားခဲ့မည်မဟုတ်ပေ။ ဝင်လိုက်ရုံပါပဲ။ ၎င်း၏ဝဘ်ဆိုဒ်တွင် သင့်အား ပေးဆောင်သည့်အရာအားလုံးကို သင်မြင်နိုင်သည်။မီးဖိုချောင်အတွက်သာမက ထုတ်ကုန်များ၏ ကျယ်ပြန့်သောရွေးချယ်မှုတွင် ပါဝင်သည်။က၊ သို့သော် ယေဘုယျအားဖြင့် အိမ်အတွက်နှင့် သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာစောင့်ရှောက်မှုအတွက်ပင်။ ဒါပေမယ့် ဟင်းချက်နည်းတွေကို ရွေးချယ်ပေးထားတာကြောင့် နောက်ထပ်ရှိပါသေးတယ်။ တခြားဘာတွေတောင်းနိုင်မလဲ။
နတ်သမီးMediamarkt သည် သင့်အား အလွန်လက်တွေ့ကျသော မော်ဒယ်အချို့ကိုလည်း ပေးပါသည်။ ထို့ထက်၊ ၎င်းသည် လူသိများသော အမှတ်တံဆိပ်များပေါ်တွင် အခြေခံထားခြင်း ဖြစ်သည်။ ပိုက်ဆံအတွက်တန်ဖိုး. ပိုမိုအခြေခံ မော်ဒယ် သို့မဟုတ် ၎င်း၏ မီးဖိုလုပ်ဆောင်ချက်ပါရှိသော တစ်ခုကို သင်ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။ နှစ်မျိုးလုံးသည် သင်၏ကျန်းမာသော ချက်ပြုတ်ခြင်းကို မြှင့်တင်ပေးပြီး နေ့စဉ်နေ့တိုင်း သင့်ကို ကူညီပေးသည်။
ဤထည့်သွင်းမှုကို အဆင့်သတ်မှတ်ရန် နှိပ်ပါ။
(မဲများ7ပျမ်းမျှ: 3.3)
စျေးသက်သာသော ဆီမပါသော အကြော်ဆိုင်ကို ရှာဖွေနေပါသလား။ ဘယ်လောက်သုံးချင်လဲ ပြောပြပါ။
«ဆီမပါတဲ့ Fryer: ထင်မြင်ချက် နှင့် ဝယ်ရန် မှတ်ချက်များ »
19:08 မှာ 2019/01/49
တစ်မိနစ်ကျော်သွားတဲ့အခါ ကျွန်တော့်အိုးက E1 ပေးတယ်ဆိုတာ ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ။
21:08 မှာ 2019/08/51
မင်္ဂလာပါ။ မော်ဒယ်ကို မသိဘဲနဲ့ မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ ပြောရမှာ တောင်းပန်ပါတယ်။ အများအားဖြင့် E1 သည် အမှားတစ်ခုကို ဆိုလိုပြီး မကြာခဏ အမှားအယွင်းများ အပိုင်းရှိ လက်စွဲစာအုပ်တွင် သတ်မှတ်ထားသည်။ ကံတရား
09:07 မှာ 2020/17/02
ပြင်သစ်အကြော်များ၊ ဘေကွန်၊ ကြက်သားနှင့် ကင်ထားသော အသီးအရွက်များကို နှစ်သက်သော်လည်း ကျန်းမာရေးအတွက်ကြောင့် ဆီများများစားစားရှောင်ပါ၊ ထို့ကြောင့် အိမ်တွင် ချက်ပြုတ်ရန်အတွက် အသုံးဝင်သော၊ လက်တွေ့ကျပြီး နေ့စဉ်သုံးနိုင်သော ဆီမပါသော အကြော်ဆိုင်၏ ရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။
ထို့အပြင်၊ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန်လွယ်ကူပြီး အချိန်ကုန်သက်သာသောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ပထမသင်တန်းကို vitro နှင့် ဒုတိယသင်တန်းကို air fryer တွင်ချက်ပြုတ်ပါသည်။
ဘာအသံလဲ? ကောင်းပြီ၊ မင်းပိုသိတယ်။
09:07 မှာ 2020/17/04
အသံကောင်းပြီး အရသာပိုကောင်းမှာ သေချာပါတယ် ဟား။ ပါဝင်သည့်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ မင်္ဂလာပါ
09:07 မှာ 2020/17/33
ငါလည်းသူတို့ကိုချစ်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါ့အစားအသောက်ကငါ့ကိုတားဆီးတယ်၊ ငါကြော်တဲ့အစားအစာကိုမစားတာ ၁ နှစ်ကျော်ပြီ။ ???? ဆီမပါသောကြော်အတွက် အကြံပြုချက်တစ်စုံတစ်ရာ ရှိပါသလား။ ကျေးဇူးပါ။
09:07 မှာ 2020/17/38
မင်္ဂလာပါ Ana။ ဝဘ်ပေါ်တွင် သင်ရွေးချယ်ရန် ရွေးချယ်စရာများစွာရှိသည်။ ဘတ်ဂျက်ကောင်းပါက Tefal ကို အကြံပြုထားပြီး ၎င်းသည် အံဆွဲထဲတွင် ပိုတင်းကျပ်သော မင်းသမီး သို့မဟုတ် moulinex ဖြစ်ပါက လှော်တက်မွှေခြင်းနှင့် အခြားအင်္ဂါရပ်များပါရှိသော cecotec ဖြစ်သည်။ မင်္ဂလာပါ
09:07 မှာ 2020/17/51
Tefal သို့မဟုတ် COSORI?
09:07 မှာ 2020/20/58
Cosori တွင် ကောင်းမွန်သော ထုတ်ကုန်များရှိပြီး အံဆွဲမော်ဒယ်များကို ကြိုက်နှစ်သက်ပါက ပိုမိုကောင်းမွန်သော ရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပြဿနာကတော့ စပိန်မှာ လောလောဆယ် Sat မရှိလို့ပါ။ ကောင်းသောရွေးချယ်မှုမှာ နယ်သာလန်နိုင်ငံမှ Princess နှင့်တူညီသောအဖွဲ့တွင်ပါရှိသော Tristar လည်းဖြစ်သည်။ မင်္ဂလာပါ
18:07 မှာ 2020/21/49
ဒယ်အိုးထဲမှာ လုပ်ရတာ အကြိုက်ဆုံးအစားအစာက ပြည်ကြီးငါး
13:07 မှာ 2020/15/08
ကျွန်တော် အကြိုက်ဆုံး ဟင်းကတော့ French Fries ပါ။
14:07 မှာ 2020/12/28
ကြော်ဖို့ အကြိုက်ဆုံး ဟင်းကတော့ ခရိုကက် ဟင်းပါ။
15:07 မှာ 2020/20/10
အကြိုက်ဆုံးဟင်းကတော့ ကြက်သွန်ကွင်းနဲ့ ကြက်သွန်မြိတ်တွေပါ။ ကြက်သားတုံးတွေလည်း ပါပါတယ်။
ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်ပြီး ပိုလွယ်ကူအောင် ချက်ဖို့ ဒီလို နက်နဲတဲ့ အကြော်အိုးကို လိုချင်ပါတယ်။
Heras ၏ Clara
16:07 မှာ 2020/09/01
17:07 မှာ 2020/11/04
ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်ကြက်သားချောင်းများ။ သစ်သီးခြောက်များ။ အဲဒီ function ပါနိုင်တဲ့ air fryer တစ်ချို့ကို ဖတ်ဖူးပါတယ်။
20:07 မှာ 2020/00/10
ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ ကြက်သားကြော်တွေကို ချက်စားချင်ပါတယ်
11:08 မှာ 2020/13/34
အကြိုက်ဆုံးကတော့ တန်ပူရာနဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်ကြော်တွေပါ။
20:07 မှာ 2020/11/46
အကြော်အိုးထဲမှာ အကြိုက်ဆုံးဟင်းက ကြက်သားနဲ့ အထူးသဖြင့် တောင်ပံတွေပါ။
20:07 မှာ 2020/11/57
အချို့သော ဇာ၊ သို့မဟုတ် အချို့။
30:07 မှာ 2020/19/36
ဒိန်ခဲနဲ့ ပေါင်းထားတဲ့ အရသာရှိတဲ့ tequeños တွေ စားရတာ မငြီးငွေ့ပါဘူး (အဲဒါတွေက ဗင်နီဇွဲလားရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း အကြော်တွေချည်းပါပဲ) အကြော်အိုးရရင် အိမ်မှာစားဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။
31:07 မှာ 2020/10/58
ဟားဟား၊ အဲဒါ လာဘ်ပေးတယ်လို့ ယူဆလို့ရတယ်။ ကံတရား
20:07 မှာ 2020/12/09
မင်္ဂလာပါ!! ကျွန်တော် အကြိုက်ဆုံး အကြော်ပန်းကန်- အာလူး၊ padrón ငရုတ်ကောင်း၊ anchovies၊ ကြက်ပေါင်မုန့်၊ ကြက်တောင်ပံ... ကြော်ရတာ ကြိုက်တယ်။
20:07 မှာ 2020/21/28
23:07 မှာ 2020/10/16
ကျွန်တော် အကြိုက်ဆုံး ဟင်းကတော့ ကြက်တောင်ပံကြော်နဲ့ အကြော်တွေပါ။
မ. Dolores P.
23:07 မှာ 2020/16/08
23:07 မှာ 2020/16/11
ကျွန်တော် အကြိုက်ဆုံးကတော့ ရင်သားကင်နဲ့ ဆီစိမ်ထားတဲ့ အာလူးကြော်တွေပါ။
24:07 မှာ 2020/18/16
27:07 မှာ 2020/03/27
အာလူးချောင်းကြော်နဲ့ croquette တွေက ဘယ်လောက်အရသာရှိလဲ၊ အပေါ်က အဆီမပါအောင် လုပ်ထားရင် ပိုချမ်းသာတယ်။
29:07 မှာ 2020/18/10
ကြိုက်တဲ့အကြော်ကို ရွေးရခက်ပေမယ့် အတွင်းထဲမှာ ကြွပ်ရွပြီး အရည်ရွှမ်းတဲ့ ကြက်တောင်ပံတွေကိုတော့ ကြိုက်ပါတယ်။ Ahhhhmmm
29:07 မှာ 2020/18/43
ကြက်ဥနှင့် အနက်ရောင်ပူတင်းပါသော ကြက်ဥနှင့် chorizo ​​ပါသော အချို့သော အာလူးကြော်၊ အာလူးစားကြရအောင်နော် !!!!
29:07 မှာ 2020/19/04
Croquettes တွေက ပထမတန်းစား၊ အရသာရှိတယ်။
30:07 မှာ 2020/10/53
အကြော်အချို့နဲ့ ဆီမပါသော အကြော်များတွင် ပြုလုပ်ထားသော ကြက်တောင်ပံများကို နှစ်သက်သည်။ အရသာ!!! ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ croquettes စသည်တို့ပါသောကြက်သားသည်လည်းအလွန်ကောင်းပါတယ်။ ကံတရားရှိမရှိ စမ်းကြည့်ရအောင်၊ ငါက ကောင်းကောင်းမသွားနိုင်ဘဲ ဒီရက်ပိုင်း အလုပ်မလုပ်တော့ဘူး။
30:07 မှာ 2020/10/54
အင်း၊ ကံကောင်းတယ်။ မင်္ဂလာပါ
30:07 မှာ 2020/17/47
အကြိုက်ဆုံး ဟင်းကတော့ ကြက်ဥနဲ့ အာလူးကြော်ပါ။
30:07 မှာ 2020/14/13
ကောင်းပြီ၊ ငါ့အတွက် ငွေရောင်မီးဖိုက စျေးကောင်းကောင်းနဲ့ ဇိမ်ခံပစ္စည်းတစ်ခုပါ။
ငါ့သူငယ်ချင်းက အဲဒါကို သဘောကျတယ်။
30:07 မှာ 2020/14/18
နောက်ဆုံးထွက်မော်ဒယ်သည် အလွန်ပြည့်စုံသည်၊ ၎င်းသည် ချက်ချင်းရောင်းထွက်သွားသောကြောင့် ရရှိနိုင်မှုပြဿနာဖြစ်သည်။ ဝဘ်ပေါ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့တွင် တူညီသော သို့မဟုတ် ပိုမိုကောင်းမွန်သော အခြားရွေးချယ်စရာများရှိပြီး အတိအကျတူညီသောပုံစံတစ်ခုပင်။ ဝယ်ယူမှုကံကောင်းပါစေ။
30:07 မှာ 2020/16/44
ငါအကြိုက်ဆုံးဟင်း… BBQ နံရိုးနဲ့ quesadillas?
30:07 မှာ 2020/16/58
အရမ်းအရသာရှိပေမယ့် မကြော်ဘူး ဟား။ ကံတရား
30:07 မှာ 2020/17/09
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်တော် ဝက်ပေါင်ခြောက်နဲ့ ကြက်ဥကြော်၊ yum yum ကြိုက်တယ်။
30:07 မှာ 2020/17/39
30:07 မှာ 2020/17/41
ငရုတ်သီးကြော်နဲ့ အာလူးပါတဲ့ Milanesas က ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံး ကြော်တဲ့ဟင်းပါ။
30:07 မှာ 2020/17/42
ကြက်သားကြော်နဲ့ အာလူး omelette က အရသာရှိတယ်။ အထူးသဖြင့် နွေရာသီတွင် ပျော်ပွဲစားထွက်ရန်။
30:07 မှာ 2020/22/05
အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ ကျွန်တော် အကြိုက်ဆုံး ဟင်းက တံကျင်ပါ။ ဤကိစ္စတွင်၊ ကျွန်ုပ်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့ဇနီးမောင်နှံသည် မကြာခဏစားရသော ထုတ်ကုန်နှစ်ခုဖြစ်သောကြောင့် ကျွန်ုပ်သည် zucchini နှင့် aubergine ကိုကြိုက်သည်မှာ သေချာပါသည်။
ဒီမနက် အကြော်အိုးဝယ်ပြီး စောစောထပြီး တန်းစီနေတယ်။ တစ်နာရီလောက်ကြာရင် တစ်လုံးတောင်မကျန်တော့ဘူး...
ရင်းရင်းနှီးနှီး နှုတ်ဆက်သည်။ သီဟ
30:07 မှာ 2020/22/51
ကျွန်တော် အကြိုက်ဆုံး ဟင်းကတော့ ငရုတ်ကောင်း နဲ့ ပြင်သစ် အကြော် နဲ့ longaniza ပါ။
30:07 မှာ 2020/23/57
သံသယမရှိဘဲ အကြိုက်ဆုံးဟင်း… အာလူးချောင်းကြော်….
31:07 မှာ 2020/10/24
01:08 မှာ 2020/05/11
ကျွန်တော် အကြိုက်ဆုံး အစားအစာတွေကတော့ ကြက်ဥ၊ chorizo ​​နဲ့ French fries တွေပါ။ မကြာခဏမစားသင့်ပေမယ့်။ ?
01:08 မှာ 2020/17/15
"Pilopi" ချက်နည်းနဲ့ အာလူးသပ်သပ်နဲ့ ကြက်သားကို မုန့်လုပ်စားလေ့ရှိပါတယ်။ ကလေးတွေကို ချစ်တယ်...ဒါပေမယ့် ကျွန်မခင်ပွန်းနဲ့ ကျွန်မ အဆီလျှော့စားရမယ် XDD ပြီးတော့ ဆီကြော်စက်ဝယ်ဖို့ စဉ်းစားနေတာ ကြာပါပြီ၊ ဒါပေမယ့် သူတို့ ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကို မယုံနိုင်သေးဘူး...
04:08 မှာ 2020/08/57
ကျွန်တော် အကြိုက်ဆုံး ဟင်းကတော့ သခွားသီးကြော်ပါ။
04:08 မှာ 2020/10/24
ဝမ်းသာလိုက်တာ မေမေကို တစ်လုံး ပေးတော့မယ်၊ အကြိုက်ဆုံး ချက်နည်းကတော့ အရပ်ရှည်တဲ့ ကြက်သား နဲ့ လိမ္မော်ရေမြှုပ် ကိတ်မုန့်
04:08 မှာ 2020/10/42
ငါအကြိုက်ဆုံးဟင်းက croquettes ဘာပဲဖြစ် ဖြစ်၊ ငါ့ကို ဆုံးရှုံးကြတယ်...
04:08 မှာ 2020/19/37
ငါ့မှာ အံဆွဲတစ်ချပ်နဲ့ Tefal က နောက်ထပ်တစ်ဝိုင်းရှိတယ်၊ နှစ်ယောက်စလုံးနဲ့ အရမ်းပျော်နေပြီး ငါ့ဒုတိယအိမ်အတွက် နောက်ထပ်တစ်လုံးကို ငါရှာနေတယ်
05:08 မှာ 2020/00/06
ကျွန်တော် အကြိုက်ဆုံး အကြော် ကတော့ calamariala Romana ပါ။
05:08 မှာ 2020/04/56
ကျွန်တော် အကြိုက်ဆုံး ဟင်းပွဲ ကြက်သားဟင်း
05:08 မှာ 2020/23/52
ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံး ဟင်းကတော့ ငရုတ်သီးကြော်နဲ့ ပြင်သစ်ကြော်ပါ။
07:08 မှာ 2020/12/06
သင်တန်းနှင့်သံသယမရှိဘဲ ... အဆိုပါ croquettes ။
08:08 မှာ 2020/09/08
Croquette နဲ့ ငါးချောင်းတွေက အရမ်းကောင်းတယ်။ ဆီရှောင်ပါ။ ပြီးတော့ ဘီစကွတ်တွေလည်း အရမ်းထွက်တယ်။ ဒါပေမယ့် အပြစ်လေးတစ်ခုတော့ ယူသွားလိုက်ပါ။
08:08 မှာ 2020/10/33
ကျွန်တော် အကြိုက်ဆုံး ဟင်းပွဲတွေကတော့ ကြက်သွန်ဖြူ ကြက်သား၊ French fries နဲ့ aubergines တွေပါ။
08:08 မှာ 2020/12/13
ကျွန်တော် အကြိုက်ဆုံး ဟင်းက မြင့်မြင့်ကြက်ကြော်
08:08 မှာ 2020/14/51
ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံး ချက်နည်းက အရမ်းရိုးရှင်းပါတယ်- French fries !!
MONICA PASCUAL ၎င်းကို ခံစားလိုက်ပါ။
08:08 မှာ 2020/20/15
အကြိုက်ဆုံးဟင်းကတော့ ကြက်သားပဲ အရသာရှိမှာ သေချာတယ်!!
08:08 မှာ 2020/22/41
ငါ့အကြိုက်ဆုံးဟင်းက ငါ့အဖွားချက်တဲ့ ခရိုကက်တွေ
08:08 မှာ 2020/23/17
gabardine ၊ ပြည်ကြီးငါးala romana ၊ marinated anchovies နဲ့ ပုစွန်တွေကို စမ်းကြည့်ချင်ပါတယ်...။ ငါ့ကို ဆူစေမယ့်အရာတွေကို မတွေးဘဲနဲ့ သူတို့ကို စားရတာ ကြည်နူးစရာပဲလား။
09:08 မှာ 2020/00/01
09:08 မှာ 2020/01/03
အကြိုက်ဆုံးကတော့ ကြက်တောင်ပံကြော် ငရုတ်သီးကြော် အရသာရှိတယ်!!!
10:08 မှာ 2020/17/15
10:08 မှာ 2020/18/27
မင်္ဂလာပါ အကြိုက်ဆုံးဟင်းကတော့ ကြက်သားဟင်းပါ။
10:08 မှာ 2020/18/34
ပြင်သစ်အကြော်များဖြင့် ခေါက်လိုက်၊ ကျွန်ုပ်၏ နတ်ဆိုးနှစ်ကောင်၏ အကြိုက်ဆုံး အစားအစာ
11:08 မှာ 2020/12/26
ဆီမပါတဲ့ အာလူးချောင်းကြော်က ဘယ်လောက်အရသာရှိပြီး ဆူအောင်လုပ်နည်း!!!!!
11:08 မှာ 2020/15/23
11:08 မှာ 2020/15/24
11:08 မှာ 2020/18/47
ကျွန်တော် အကြိုက်ဆုံး ချက်နည်းကတော့ အသီးအရွက် ကြွပ်ကြွပ် ၊ ကုလားပဲခြောက် အဆာပြေ နဲ့ DIVINE ပါတဲ့ ဘေကွန်ချိစ် အကြော်တွေ ၊
12:08 မှာ 2020/09/57
အာလူးကြော်၊ ဒါပေမယ့် အဆီမပါတဲ့ အာလူးတွေ ၊
12:08 မှာ 2020/16/57
ကျွန်တော် အကြိုက်ဆုံး ဟင်းကတော့ French Fries နဲ့ wings ပဲ လိုချင်ပါတယ်
12:08 မှာ 2020/17/27
အာလူးနဲ့ croquettes တွေကို ကြိုက်တယ်။
12:08 မှာ 2020/18/05
အကြိုက်ဆုံးဟင်းကတော့ ပါးပါးလှီးထားတဲ့ ဝက်အူချောင်းကြော်တွေက ကြွပ်ပြီး အဆီကင်းပါတယ်။
Francisco က Javier
12:08 မှာ 2020/18/44
ကျွန်ုပ်၏ ဟင်းလျာများမှာ ဆီမပါသော အသီးအရွက်များ နှင့် ဘေ့ကင်ကြော်များ ဖြစ်ပါသည်။
12:08 မှာ 2020/19/45
ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံး ဟင်းက အမှိုက်အားလုံးကို အဆီမပါတဲ့ အကြော်အိုးကြောင့် သေချာပေါက် ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်ပြီး အဲဒီအစားအစာကို စားနိုင်ပါတယ်။
12:08 မှာ 2020/21/57
အကြိုက်ဆုံးဟင်းက မူရင်းမဟုတ်ပေမယ့် နင်ရလိုက်တဲ့ French fries ဟာ ဟား။ ဆီမပါသော အကြော်အိုးတွင် ၎င်းတို့ကို အခမဲ့ပြုလုပ်နိုင်မလား။ မင်္ဂလာပါ
13:08 မှာ 2020/12/06
အကြိုက်ဆုံးဟင်းကတော့ အာလူးနဲ့ ကြက်သွန်နီနဲ့ ဟင်းရည်ထဲမှာ ကြက်သားပါ။
14:08 မှာ 2020/21/06
09:01 မှာ 2021/19/54
အလွန်ကောင်းသောဆောင်းပါး၊ အကူအညီအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် !!
Black Friday Oil Free Deep Fryers များ
Cyber ​​Monday oil-free fryers များ
မူပိုင်ခွင့် 2022 ပို့ဆောင်မှု 24 နာရီ - တရားဝင်အာမခံ - လွယ်ကူသောငွေပေးချေမှု